Cristiano Ronaldo oo isagoo careysan isaga tagay garoonka Allianz inta uusan dhammaan kulankii xalay ee Juve iyo Milan – Gool FM
(Turin) 11 Nof 2019. Sida wararku ay sheegayaan Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa isaga tagay garoonka Allianz ka hor inta uusan dhammaan kulankii ay xalay la ciyaareen AC Milan.
Inkastoo kooxdiisa Juventus ay guul ka gaartay xalay Naadiga AC Milan haddana waxaa la soo warinayaa in CR7 uu garoonka isaga tagay isagoo ka carooday badelkii lagu sameeyey kulankaasi.
Rossoneri ayaa heshay fursadahii ugu fiicnaa kulanka, laakiin Paulo Dybala oo daqiiqadii 55-aad ee kulanka badalay Ronaldo ayaa noqday geesiga marwada duqda ah kaddib markii uu dhaliyay goolka ay guusha ku qaateen kulankan.
Kabtanka Portugal ayaa u muuqday mid aad uga carooday badelkii lagu sameeyey kulankan isagoo aan xitaa gacan qaadin tababarihiisa ayuuna si toos ah u aaday qolka labiska ka hor inta uusan isaga tagin garoonka Allianz inta aysan dhammaan ciyaarta sida ay warbaahinta Talyaanigu warinayso.
Shabakadda Sky Sport Italia ayaa sheegaysa in Ronaldo uu xilli hore ka tagay garoonka, isagoo sida la warinayo baxay kulanka oo ay ka harsan tahay inuu dhammaado kaliya saddex daqiiqo.
Macallin Maurizio Sarri ayaa qaatay go’aankan uu CR7 garoonka kaga saaray, laakiin dhammaadkii kulanka waxa uu caddeeyey iuu dareemay in xiddiga xulka qaranka Portugal uusan taam buuxa ahayn, isla markaana uusan si fiican u ordi karin.
Waxa uu qirtay hoggaamiyaha Juve ee Sarri inuu diidanaa inay dhibaatadu ku sii kororto xiddigiisa, waana markii labaad oo uu badel u taagayo CR7 iyadoo horay loo ogaa inuusan Ronaldo ku farxin badelkii lagu sameeyey kulankii Lokomotiv Moscow.